कागती खेति गर्ने विधि र तरिका (जानी राखौं)
बुधबार, असोज १४, २०७७ ०६:२०:१८ युनिकोड
वर्तमान परिपेक्षमा धेरै जसो स्थानिय तहले गाँउ, समुदायमा कागति, सुन्तला तथा सुन्तला जातका फलफुलका वेर्ना वितरण गरेको छ । तर सो सम्बन्धी कुनै पनि तालिम तथा उत्पादन प्रक्रिया बारे कृषक समक्ष जानकारि छैन । यस खेति प्रविधिको बारे म व्यक्तिगत रुपले तालिम सञ्चालन गर्न नसकेपनि यस प्रकाशनबाट भएनि कै जानकारी दिन सकिन्छ कि भन्ने आशा लिएको छु ।
कागती सुन्तला जात भित्र पर्ने अमिलो समुहको फलफुल हो । यो नेपालको पहाड,वेंसी, भित्री मधेस लगायत प्राय जसो सवै तीर खेती गरिन्छ । यो एक व्यवसायिक रुपको साथ साथै औशधिय, श्रृगांर वा कस्मेटिक प्रयोजन , भान्सा तथा विभिन्न दृष्टिकोणबाट महत्वपुर्ण छ । यो परम्परागत रुपमा पहिले देखिनै खेती गरीदै पनि आइरहेको फलफुल हो ।
माटो यस खेतीको लागी जमिनको सतहबाट २ मि. गहिराइ सम्म चट्टान नभएको, पानी नजम्ने,प्रशस्त मलिलो प्राङ्गारिक पदार्थ भएको राम्रो हुन्छ । यसको लागी पि. एच्. ५.५ देखी ६.५ सम्मको दोमट माटो उपयुक्त हुन्छ । १०० देखि १५०० मि. सम्मको उचाइ ,८०० देखि १२०० मिलि पानी पर्ने,१० देखी ३५ डिग्री से. बिचको तापक्रम तुसारो नपर्ने उपयुक्त हुन्छ ।
तराइ, भित्री मधेस बेसी खोचको लागी पनि उपयुक्त छ । ३ देखी ४ मिटर उचाइ, फल (५०/५५) ग्रामको हुन्छ ।
तराइ, भित्री मधेस, खोच तथा तटीय क्षेत्रका लागी पनि उपयुक्त छ । यसको फल –९०÷१०० ग्राम पातालो बोक्रा हुन्छ ।
नोटः दुवै जातका कागती मौसमी र बमौसमी फुल लाग्ने हुदा सबैजसो समयमा फल दिन्छ ।
यो प्राय जसो सबै किसिममा गर्न सकिन्छ । जस्तै : बिउबाट, बडिङ, जरा काण्ड कटिङ इत्यादि ।
बगैचा स्थलको छनौटः
जमिनको मोहडा, भिरालोपना, जमिनको उचाइ, तापक्रम, सुर्यको प्रकाश, बजार क्षेत्र, रेखदेख सुरक्षाको हेतुले उपयुक्त स्थान छनौट गर्नु पर्छ । यदि सिंचाइको सुबिधा छ भने दक्षिण र पुर्वि मोहडामा लाउँदा ठीक हुन्छ ,यदि छैन भने उत्तरी मोहडामा बगैँचाको रेखांकन गर्नु पर्दछ ।
जमिनको तयारी र बिरुवा सार्ने :
उपयुक्त जात छनौट गरी कुनै भरपर्दो नर्सरीबाट विरुवा लेराउने । खाडल विरुवा रोप्नु भन्दा कम्तिमा १ महिना अगावै खनिसकेको हुनुपर्दछ । खाडल खन्दा ५×५ मि. बोट देखी बोटको दुरी कायम गरी १ घनमिटरको खाल्टो खन्नु पर्दछ । विरुवा लगाउनु अगाडि सतहको माटोलाई कुहेको गोबरमल सँग मिसाएर खाल्टोलाई पुर्नु पर्छ ।
समय मलखादको मात्रा :
जमिन तयार गर्दा - ५० के.जी. राम्ररी पाकेको कम्पोष्ट वा गोबरमललाई खाडल खन्दा निस्केको माथिल्लो भागको माटोका राम्रोसँग मिसाई राम्ररी खादेर खाडलमा भर्ने
विरुवा रोप्दा - ५०:५०:२५ ग्राम क्रमश डि.ए.पी,युरिया, म्युरेट अफ पोटास विरुवा रोप्नु भन्दा अगावै माटोमा मिसाएर बिरुवा रोप्ने
विरुवा १–२ बर्ष हुँदा - २०-२५:१००:५०:१०० ग्राम क्रमश गोबरमल,युरिया, डि.ए.पी.र पोटास प्रति वोटका दरले राख्नु पर्दछ ।
वयस्क बोट- ४०ंं-५०:५००:२५०:५०० क्रमश गोबरमल, युरिया,डि.ए.पी.,र पोटास प्रति बर्ष प्रति बोटका दरले राख्नु पर्दछ ।
नोटः युरिया मल एक पटक हिँउदमा,एक पटक मनसुन शुरुहुनु भन्दा अगाडी र एक पटक मनसुनको अन्तिमा दिँदा राम्रो हुन्छ । मल दिँदा बोटको वरीपरी २५ से.मी. जति गहिरो खाडल बनाई
सिंचाइ : फुल फुल्ने, फल लाग्ने र पालुवा आउने अवस्थामा सिंचाइ दिनु पर्दछ ।यसको लागी थोपा सिंचाइ अति उत्तम रहन्छ, यसको अलवा बोटको वरिपरि कुलेसो बनाएर पनि सिंचाइ गर्न सकिन्छ ।
विरुवाको काटँछाट तथा तालिम : कागतीको विरुवालाई समय समयमा काटँछाँट गर्नु पर्दछ । चोर हाँगा,रोग किरा लागेको हाँगा र रुटस्टकबाट आएको अंकुरण समेतलाई हटाउनु पर्दछ । जमिनको १ मिटर माथि बाट बढिमा ३ वटा मुल हाँगाहरु मात्र राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।
कागतीमा लाग्ने मुख्य किराहरु :
१.कत्ले किराः कत्ले किरा नरम र कडा शरिर भएको गरि २ प्रकारको हुन्छ । यसले फल,पात,डाँठमा टाँसिएर रस चुस्ने गर्दछ ।
ब्यबस्थापनः सर्बे तेल १० एम.एलं प्रति लिटर पानिमा मिसाएर फुल फुल्नु भन्दा अगाडि वा फल टिपि सकेपछि स्प्रे गर्ने । यसबाट सक्रमण भएको बोट विरुवा
२.पतेरो कीराः यस कीराको माउँ र बच्चा दुवैले कलिला फलहरुको भेट्नुनिरबाट रस चुस्दछन् । जसको कारणले फल छिप्पिन नपाउँदै पहेँलो भएर झर्दछ ।
ब्यबस्थापनः मनोसिल १–२ एम्.एल्. प्रति लिटर पानीमा मिसाई १५ दिनको फरकमा पुरै बोट भिज्ने गरी छर्कनु पदर्छ ।
३.गवारोः कलिला पात खान्छ । बच्चाले काण्डमा प्वाल पारेर भित्र जान्छ र फुल पारेर आफ्नो संख्या वृद्दि गर्छ ।
ब्यबस्थापनः रोगी हाँगा हटाउने, प्वाल परेको काण्डमा कपडामा मट्टितेलले भिजाएर प्वालमा घुसाएर कम गर्न सकिन्छ ।
४.सिट्रस सिल्लाः वयस्क खैरो ध्वासे र पछाडिको भाग हल्का उठेको हुन्छ तर बच्चा चाहिँ हरियो रंगको हुन्छ । यसले पनि पातबाट रस चुसेर नै खान्छ ।
ब्यबस्थापनः रोगर २ एम्.एल्.प्रति लिटर पानिमा मिसाएर छर्कने ।
५.फल कुहाउने झिगाँः हेर्दा झिँगा जस्तो देखिन्छ, यसले कलिला फललाई छेडेर भित्र जान्छ र भित्र फुल पार्छ र फल कुहाउँछ ।
व्यबस्थापनः रोगी फल टिपेर गाड्ने , फेदको वरिपरि १० गा्रम मालाथियन धुलो माटोमा मिसाउने । भाले झिगाँलाई आर्कषण गर्ने ट्रयापको व्यबस्था मिलाउने ।
कागतीमा लाग्ने रोगहरुः
१.जरा कुहिनेः जरामा कालो ढुसी जस्तो देखि जरा कुहिएर जान्छ । यसको कारणले गर्दा पात पहेँलो हुदै जान्छ र अन्तमा बोटनै मर्छ ।
ब्यबस्थापनः बोडो पेष्टको प्रयोग गर्ने, फेदको वरिपरि ट्राइकोड्रमाको प्रयोग गर्ने र तिनपाते कलमी गरि १५ से.मि. माथि लगाउने ।
२.सिट्रस ग्रिनिङः सबभन्दा बिनाशकारी रोगमा यो रोग पर्न आउँदछ । पात गुजुमुज्ज परि पँहेलो ठाडो बन्न जान्छ ।
ब्यबस्थापनः स्वस्थ बिरुवा लगाउँनै उत्तम हुन आउँछ । बगैचा सफा राखी चोटपटक वा हिउँदमा बोडो पेष्ट लगाउँनु पर्दछ ।
३.खराने रोगः पालुवा आउँने बेलामा चिसो बढि भएमा ओसिलो बढि भएमा यो संक्रमण देखिन्छ । पात यसले गर्दा सुक्दै जान्छ र अन्तमा बोटनै मर्छ ।
ब्यबस्थापनः २ व.ग्राम सल्फर प्रति लिटर पानिमा मिसाएर छर्ने, नँया पालुवा आउँन साथ १ भाग गहुतमा ५ भाग पानि मिसाएर छर्कने ।
नोटः सम्र्पुण बोटबिरुवालाई स्वस्थ राख्न उचित समयमा मल,जल र हेरचाहको बढि भुमिका रहन्छ ।
फल फुट्ने तथा झर्ने समस्याः
फलमा पानिको मात्रा कम भयो भने, पतेरोले फलको भेट्नु चुसेर कमजोर बनाएमा फल झर्दछ यसै गरी माटोमा पोटासको मात्रा कमि भएमा फल फुट्ने गर्दछ ।
ब्यबस्थापनः सिंचाइको राम्रो व्यबस्था मिलाउने र फल झर्ने समस्याको लागि पोटास युक्त मलको प्रयोग गर्ने ।